Mkparị, nkwutọ na nkwutọ | Law & More B.V.
blog » Mkparị, nkwutọ na nkwutọ
Mkparị, nkwutọ na nkwutọ
Ingkọwapụta echiche gị ma ọ bụ nkatọ gị bụ ihe ụkpụrụ abụghị ihe arụ. Agbanyeghị, nke a nwere oke ya. Nkwupụta ekwesịghị ịbụ iwu. A ga-ekpebi ma ihe ekwesighi iwu akwadoghị n'ọnọdụ ọ bụla. N ’ikpe ahụ, a na-ahazi ihe dị n’etiti ikike mmadụ ikwupụta ihe ya n’aka na ikike ichebe nsọpụrụ na aha mmadụ n’aka nke ọzọ. Ndị mkparị ma ọ bụ ndị ọchụnta ego na-enwe echiche ọjọọ mgbe niile. N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-ele mkparị anya dị ka iwu akwadoghị. Na omume, a na-ekwukarị ụdị mkparị abụọ. Enwere ike imebi aha na / ma ọ bụ nkwutọ. Ma nkwutọ ya na ikwutọ ya na-ama ụma etinye onye ahụ n’amaghị ama. A kọwara ihe nkwutọ na nkwutọ pụtara kpọmkwem na blọọgụ a. Anyị ga-eleba anya na mmanye iwu nwere ike ịdabere na onye ikpe amamịghe na / ma ọ bụ ikwutọ mmadụ.
“Mkparị ọ bụla nke nkatọ na-agaghị ekwujọ ma ọ bụ nkwutọ” ga-eruru dị ka mkparị dị mfe. Ihe e ji mara mkparị bụ na ọ bụ mkpesa iwe. Nke a pụtara na naanị onye a na-ebo ebubo nwere ike gbaa akwụkwọ ma agbachitere onye agbachitere ya. A na-ahụkarị mkparị dị ka ihe na-adịghị ọcha, mana ọ bụrụ na ị maara nke ọma ikike gị, n ’oge ụfọdụ ị nwere ike ijide n’aka na a ga-ekpe onye ahụ kparịrị gị ebubo. Agbanyeghị, ọ na - emekarị na onye a na - ebo ya anaghị akọcha mkparị n'ihi na o nwere ike nwee ọghọm ya na mgbasa ozi ndị ọzọ.
Mgbe ọ dị ụma ịsọpụrụ nsọpụrụ onye ma ọ bụ ezi aha mmadụ, na ebumnuche nke ịkọwapụta ya, onye ahụ bụ onye ikpe ụgha. Assaultkpachara anya na-egosi na mmadụ ma ụma tinye aha ọjọọ n’ọkụ. Site na mwakpo ịma mma, onye omebe iwu pụtara na ịta gị ntaramahụhụ ma ọ bụrụ na ị kpachara anya na-ekwu ihe ọjọọ gbasara mmadụ, otu ma ọ bụ ọgbakọ, na ebumnuche nke ịkpọsa ya. Ntapu nwere ike ime n’okwu ma dika ede ede. Mgbe edere ya ede, o tozuru oke dịka ihe edeturu. Ebumnuche maka ịkọcha bụ mgbe a na-abọ ọbọ ma ọ bụ nkụda mmụọ. Otu uru dịịrị onye a tara ahụhụ bụ na ịkọcha nkọ dị mfe igosipụta ma ọ bụrụ na edere ya ede.
A na-ekwuwa okwu mgbe mmadụ kpachaara anya na-ekwutọ mmadụ site n’ikwupụta nkwupụta ọhaneze, nke ọ maara ma ọ bụ kwesịrị ịmara na nkwupụta ndị ahụ esiteghị n'eziokwu. A ga-ahụ na ekwutọ mmadụ bụ onye na-ebo mmadụ ebubo ụgha.
Mkpesa gha eme dabere n’eziokwu
Ajụjụ dị mkpa a na-enyocha na omume bụ ma ọ bụrụ na, ruo ole ole, ebubo ndị ahụ nwetara nkwado na eziokwu ndị dị n'oge nkwupụta ndị ahụ. Ya mere, onye ọka ikpe na-eleghachi anya na ọnọdụ ahụ dịka ọ dị n'oge nkwupụta nke ajụjụ ahụ. Ọ bụrụ na okwu ụfọdụ echee na iwu akwadoghị onye ọka ikpe ahụ, ọ ga-ekpebi na onye ahụ kwuru nkwupụta ahụ ga-ata ahụhụ maka mbibi ọ na-esite na ya. N'ọnọdụ ka ukwuu, onye a tara ahụhụ nwere ikike ịkwụ ụgwọ. N'ihe banyere nkwupụta iwu na-akwadoghị, aja nwere ike ịrịọ maka mmezi site n'enyemaka onye ọka iwu. Ntughari putara na akwukwo edeputara ma obu okwu ekwesighi idozi. Na nkenke, ndọtị na-ekwu na ozi izizi ezighi ezi ma ọ bụ enweghị isi.
Usoro obodo na nke ndị omekome
N'okwu mkparị, kwutọ ma ọ bụ kwutọ mmadụ, onye a na-aja ihe nwere ike ịga n'ihu ma ndị nkịtị ma ndị omekome. Site na iwu obodo, onye a na-aja ihe nwere ike ikwu na ọ ga-akwụ ụgwọ ma ọ bụ na-edozi ya. N ’imebi aha ya na ikwutọ ya bụ mpụ ndị na-emejọ, onye a na-ebo ya nwekwara ike ịkọ ha ma rịọ ka a kpụpụ onye ahụ mere ihe ikpe n'okpuru iwu mpụ.
Mkparị, nkwutọ na nkwutọ: gịnị bụ mmachi a?
Ikwutọ dị mfe nwere ike ịta gị ntaramahụhụ. Otu ihe kpatara nke a bụ na onye ahụ metụtara gha emeela mkpesa yana ndị Ọrụ Ọha na Ikpe Ikpe ga-ekpebila ikpe onye a na-enyo enyo. Ikpe kachasi ike nke ikpe ahụ nwere ike wepụta bụ mkpọrọ ọnwa atọ ma ọ bụ ntaramahụhụ nke abụọ (€ 4,100). Ole ntaramahuo ahu ma obu (mkporo) ntaramahu di oke nkparita uka. Iji maa atụ, a na-ata ndị akparị oke ntaramahụhụ ike.
Ntapụ na-ata ntaramahụhụ. N’ebe a, onye ahụ tara ahụhụ kwesịrị ịkọ akụkọ yana ndị Ọrụ Ọha na Ikpe Ikpe ga-ekpebila ikpe onye a na-ebo ebubo. Ọ bụrụ na onye ọka ikpe nwere ike ịnwe njigide kachasị ọnwa isii ma ọ bụ ntaramahụhụ nke atọ (€ 8,200). Dị ka nke mkparị, a na-ahụkwa ịdị mkpa nke mmejọ ahụ ebe a. Iji maa atụ, ịta onye na-arụrụ onye ọrụ gọọmentị ahụhụ ntaramahụhụ ka njọ.
N'ihe banyere nkwutọ, ntaramahụhụ a na-enye iwu siri ike karị. N'ihe banyere nkwutọ, thelọ ikpe nwere ike ịkagbu oge nga mkpọrọ afọ abụọ ma ọ bụ ntaramahụhụ nke otu nke anọ (€ 20,500). N'okwu banyere nkwutọ, enwere ike ịnwe akụkọ ụgha, ebe onye nkwuputa ahụ maara na emebeghị ihe ọjọọ ahụ. Na omume, a na-ekwu na nke a dị ka ebubo ịda mba. Ebube ndị a na-abụkarị n'ọnọdụ mmadụ kwuru na enwetara ma ọ bụ megburu ya, ebe nke a abụghị ikpe.
Nleda aha ọjọọ na / ma ọ bụ ikwutọ mmadụ
Ntaramahụhụ imebi aha ya na / ma ọ bụ ikwutọ ya bụ onye amamịghe. Site '' nwaa '' putara na a nwara imejọ ma ọ bụ ikwutọ onye ọzọ, mana nke a kụrụ afọ n'ala. Ihe choro maka nka bu na agha aghaghi ibido n'isi ya. Ọ bụrụ na emebeghị ụdị mmalite a, enweghi ịta gị ahụhụ. Nke a metụtakwara mmalite, ma onye mere ihe ahụ kpebiri na ya ga-ekpebi ịghara ikwutọ ma ọ bụ ikwutọ.
Ọ bụrụ na onye a ga-ata gị ụta maka ịnwa ebubo ma ọ bụ ikwutọ, ntaramahụhụ kachasị nke 2/3 nke ntaramahụhụ kachasị nke ị mezuru iwu ga-adị. N'ihe banyere ịnwale ịkọwa, nke a bụ ikpe kachasị nke ọnwa 4. N'ihe banyere nkwuputa nkwutọ, nke a pụtara ntaramahụhụ kachasị nke otu afọ na ọnwa anọ.
Have ga-akparị mkparị, ikwutọ ma ọ bụ nkwutọ? Dochoro ihe omuma banyere ikike gi? Mgbe ahụ egbula oge ịkpọtụrụ Law & More ndị ọka iwu. Anyị nwekwara ike inyere gị aka ma ọ bụrụ na Ndị Ọrụ Ọha na-enyocha gị onwe gị. Ọkachamara anyị na ndị ọka iwu pụrụ iche n'ihe gbasara iwu mpụ ga-enwe obi ụtọ inye gị ndụmọdụ yana nyere gị aka n'usoro ikpe.
Previous Post Nchụpụ nke ụlọ ịgbaziri agbazi
Next Post Nchụpụ nke ezi uche dị na ya